Sida Loogu Helo Mareeg Yar Oo Darajo Sare Google Ka Hayso | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/Sida Loogu Helo Mareeg Yar Oo Darajo Sare Google
Sida Loogu Helo Mareeg Yar Oo Darajo Sare Google
Weydii su'aasha SEO ee maanta waxay ka timid Bryan ee Ohio. Bryan ayaa waydiinaya:
"Waxaan leeyahay shabakad lix bog ah. Suurtagal ma tahay in Google-ka lagu qiimeeyo mid aad u sarreeya?
Hi Bryan, waa su'aal weyn.
Haa, waxaad ku dareyn kartaa degel yar (xitaa website ka kooban dhowr bog) sare ee Google.
Caqabadda ugu weyn ee leh mareegaha yaryar ayaa ah inaadan lahayn awood aad u badan si aad u abuurto qaab-dhismeedka isku xidhka gudaha, iyo haddii mid ka mid ah boggaga aanu ahayn mid isku xidhi kara ma awoodid inaad ka gudubto maamulkaas.
Taas macnaheedu maaha inaadan samayn karin - kaliya waa inaad noqotaa mid istiraatijiyad ah.
Aynu kala jebinno waxaad samayn karto si aad u gaadho darajada raadinta sare ee degel yar.
Talooyin loogu talagalay Qiimaynta Mareegaha Yaryar ee Raadinta
U samee khariidad ereyga muhiimka ah iyo kooxaha mawduucyada bog kasta oo aad rabto in boggaga lagu soo bandhigo. Hadda samee nuqul ka faa'iidaysan doona qofka raadinaya adiga oo siinaya xal.
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad tixgeliso inaad ku darto FAQs khuseeya iyo miisaska isbarbardhigga boggaga haddii loo baahdo.
Ku dar sawiro taageeraya, jaantusyo, fiidyowyo, iyo shay kale oo xog ah kuwaas oo wanaajinaya khibrada isticmaalaha oo kor u qaadaya nuqulka marka ay khusayso. Kaliya iska hubi in kuwanu aysan aad hoos u dhigin boggaaga.
Dib u dhig wax kasta oo ka xannibaya bogga inuu awoodi karo inuu sameeyo oo hagaajiyo isbeddellada CLS kasta. Hubi inaad hubiso:
Isku cadaadi dhammaan sawirada iyo faylasha sida ugu fiican ee aad awooddo.
Ka saar kood kasta oo xad dhaaf ah oo ay ku jiraan:
Plugins iyo apps
Ku dar maktabadaha schema si aad u qeexdo bog kasta iyo walxaha ka dhex jira bogga.
U samee dib-u-xireyaasha boggaga hoyga adoo isticmaalaya calaamado calaamad ah si ay u dhisaan maamulka. Ka gudub maamulkaas bogga hoyga leh xiriirinta gudaha ee shanta bog ee kale.
Isku day inaad hesho qaar ka mid ah calaamadaha PR kuwaas oo si toos ah ula xiriira ganacsigaaga oo ka dhigi doona goobtaada "xusuusinta" mid u qalma (ma aha isku-xirnaanta u qalma).
Ku bood xiisayaasha sida deeqaha waxbarasho iyo soo dhejinta martida. Waxaad rabtaa xiriiryo tayo leh.
Haddii aad tahay meherad maxali ah ama degel, ka diwaangeli meheraddaada Google My Business oo aad u cusbooneysiiso.
Kobcinta Mareegtaada Waxay Noqon kartaa Xal Wanaagsan
Talooyinka kor ku xusan aad bay u fiican yihiin haddii aad rabto in aad website-kaaga ka dhigto mid yar.
Laakin waa in aan weydiiyaa, taasi ma doorashadaada kaliya ayaa ah?
Websaydhyada yaryar waxay noqon karaan kuwo wanaagsan haddii aad rabto inaad bixiso kaadhka ganacsiga, laakiin ma jirto sabab dhab ah oo aan ahayn bandwidth si aad u yareyso.
Waxaad ku dari kartaa blog oo aad wadaagi kartaa mawduucyo iyo macluumaad khuseeya. Waxa laga yaabaa in ay caqli badnaato in lagu daro bogag adeeg ku jihaysan oo dheeraad ah iyo jawaabo ka wanaagsan su'aalaha caadiga ah adiga oo boggaga qayb ka dhigaya.
Haddii aad tahay adeeg bixiye ama meel dhacdo, xafidista diiwaanka iyo wadaagista waxa boosku u eg yahay xilli ka dambeeya xilli-ciyaareedka iyo sannadba sannadka ka dambeeya waxay kaa caawin kartaa inaad tusto inaad weli tahay goob “it” oo aad dhisto kalsoonida macaamiisha.
Tani waxay sidoo kale ballaarineysaa fursadahaaga si aad u darajeyso "goobaha arooska ee magaalada XY" ama "goobaha dhacdooyinka ee magaalada XY."
Runtii ma arko sabab kasta oo lagu qorsheynayo ilaalinta degel yar haddii ujeedadu tahay kobaca shirkadda iyada oo loo marayo suuq-geynta dhijitaalka ah.
Haddii aad ballaarin karto, u bax. Waxaa jira darajooyin badan oo raadinta iyo faa'iidooyinka khibradda macmiilka si ay u koraan goobtaada oo ay weheliso ganacsigaaga.
Waxaan rajeynayaa in tani ay ka jawaabto su'aashaada waana ku mahadsan tahay akhrinta!
5 Siyaabaha La Xaqiijiyay ee Lagu Kordhiyo Qiimaynta Google-kaaga
7-da Qodob ee ugu Sarreysa: Maxaa Muhiim u ah SEO
SEO ee Bilawga: Hordhac Aasaaska SEO
Qoraalka tifaftiraha: Weydii SEO waa tiirar talobixin SEO ah oo toddobaadle ah oo ay qoreen qaar ka mid ah khubarada SEO ee ugu sarreeya warshadaha, kuwaas oo ay gacanta ku soo xusheen Joornaalka Mashiinnada Raadinta. Ma qabtaa su'aal ku saabsan SEO? Buuxi foomkayaga. Waxaa laga yaabaa inaad ku aragto jawaabtaada boostada #AskanSEO ee soo socota!
Tijaabo: Sawirrada Dadku Si Wanaagsan Ma u Qabaan Instagram?